Spotify Ukuphucula ukuSebenza | TeraNews.net
Isoftware yeSpotify iphucula ukusebenza
umbhali UKravetz Pavel Papashwe ngomhla 07.12.2020
Umboniso bhanyabhanya onomdla wohlobo lweBeta lwesicelo seSpotify ungene kwi-Intanethi. Kukho ithuba lokuba inkqubo yeSpotify iphucule ukusebenza. Kwiseto, inkonzo iya kuvela ukukhangela umculo kumathala eencwadi obuqu ukuba akukho nxu lumano kwindawo yogcino lwedatha.
Yintoni i-Spotify kwaye Kutheni uyifuna
I-Spotify yinkonzo ekuvumela ukuba umamele ngokusemthethweni umculo kwi-Intanethi. Olona phawu lubalulekileyo lwenkqubo zii-algorithms zomsebenzi wayo. Kwanele ukumamela isibini seengoma zenkonzo ukuze zilungelelanise ngokuzenzekelayo incasa yomculo yomphulaphuli. Ekupheleni kokudlala kwakhona, inkqubo ngokwayo iya kufumana umculo omtsha kwaye inikezele ngokumamela. Ngokokujonga komsebenzisi, iipesenti ezingama-99 zesicelo "uqikelelo" lomdla womnini.
Ungakulibala nangokukhuphela ingqokelela yomculo kwimisinga ngonaphakade. Inkonzo ngokwayo ihlanganisa iMixes yeendlela ezidumileyo ngosuku, iveki, inyanga, unyaka. Ungahlela umculo ngokweekhrayitheriya ezahlukeneyo.
Kuya kufuneka uhlawule ngokusebenzisa iSpotify. Okanye endaweni yoko, rhuma ixesha elithile lokusetyenziswa. Ixabiso lenkonzo lahlukile kwilizwe ngalinye. Ngubani obhala ithegi yexabiso ayaziwa. Kuba kwamanye amazwe atyebileyo ixabiso leSpotify liphantsi. Kwaye kumazwe ahlwempuzekileyo (kwilingana elifanayo ledola) kuya kufuneka uhlawule amaxesha angama-5-10 ngaphezulu.
Ewe awunyanzelekanga ukuba uhlawule nantoni na usebenzisa iSpotify yasimahla. Kodwa kufuneka unyamezele ntengiso, isithintelo sokukhuphela umculo kwindawo yakho yokugcina. Kwaye kwakhona, isibini esiphazamisayo ngokubhekisele kumgangatho kunye nokutshintsha umkhondo okungenamda.
Ngapha koko, iiprogram kufuneka ukuba zazise ukusebenza okuphuculweyo ixesha elide. Emva kwayo yonke loo nto, le nkqubo ihlawulwe kwaye inkonzo kufuneka ibe kwinqanaba elifanelekileyo. Inguqulelo ye-beta yongeze amandla okuphulaphula umculo ngaphandle kweintanethi. Kule nto, iskena siza kuvela kwinkqubo, eya kuthi ikhangele umkhondo kugcino lwe-smartphone kuyo yonke imikhombandlela. Ngokuqinisekileyo, oku kusebenza kufana nenkonzo ye-YouTube "yokuxuba ngaphandle kweintanethi".
Nangona isicelo sicela imali, yenza lula ubomi babasebenzisi. Ngokwendalo kwabo banika ukhetho kwiimveliso ezintsha, kunokuba "bakhuhle" imikhondo yakudala emingxunyeni.
Indlela entsha yokwenza imali ngokuchasene neApple
I-Honor Pad 7 yithebhulethi yokuqala yophawu oluzimeleyo lwesiTshayina